बुधवारसम्म संसदले सभामुख पाउने, नेकपाको उम्मेदवार अग्नि सापकोटा !
संसदको पहिलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउने बाटो खुलेको छ ।
नेकपा अनिर्णित बन्दा लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा सभामुखबिहीन बनेको थियो ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सभामुखको उम्मेदवारमा सहमति भएपछि यसैसाता सभामुख निर्वाचनको तयारीमा संघीय संसद सचिवालय जुटेको छ ।
अध्यक्षद्वयबीच सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सहमति भएको नेकपा स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति अनुमोदनका लागि आइतवार अपरान्ह नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ ।
नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार घोषणा गर्नासाथ प्रतिनिधि सभाले सभामुख निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्य थाल्ने भएको छ । पटक-पटक सूचना टाँसेर स्थगित भई सोमवारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख निर्वाचनको कार्यसूची छ ।
‘नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाएमा भोलि सभामुख निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने तयारी छ’ सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सोमवारको बैठकबाट सभामुख निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।’
दलहरुबीच सहमति भएमा मंगलवारका लागि उम्मेदवारको नाम दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने तथा बुधवारको बैठकबाट सभामुखको लागि मतदान गर्ने तयारी संसद सचिवालयले गेरको छ ।
नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याएपछि उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामाको तयारी गरेकी छन् ।
यसअघि आफूलाई नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउन माग गर्दै उनले पार्टीले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि मात्र राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाएको छैन ।
सचेतक पुष्पा भुसाल या पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादवलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
सभामुखमा सुवास नेम्वाङको च्याप्टर क्लोज, अब प्रचण्डले जो चाह्यो त्यही
एमसीसी सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेकपा कार्यदल
एमसीसी प्रतिवेदन बुझाएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्व...
भ्रष्टाचार प्रमाणित भए नेकपामा स्थान रहँदैन् : नेता ...